Mareykanka oo dhisaya Laami iyo Jid tareen oo isku xira Soomaaliya iyo Jabuuti - Halbeeg News
WASHINGTON (HALBEEG)- Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu hirgeliyo marin dhinaca dhulka ah oo isku xiri doono xarunta weyn ee Militariga Mareykanka ee Afrika ee Jabuuti iyo Soomaaliya.
Sida ay baahisay jariidada Foreign Policy, Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa mareysa wejigii koowaad ee qorshaha lagu doonayo in lagudhiso jid dheer oo isku xira Saldhigga Mareykanka ee Jabuuti iyo saldhigyada kale ee uu ku leeyahay gobolka geeska Afrika.
Wararka ayaa sheegaya in marka hore la hirgelin doono dhabo tareen oo isku xiri doonta Lemoner oo ah saldhigga Mareykanka ee Jabuuti iyo Balidoogle oo ah xarunta Mareykanka ee Soomaaliya.
Qandaraaslayaasha ku lugta leh mashruucan ayaa sheegay in meelaha uu marinkan sii marayo ay ku jiraan meelo ay haatan gacanta ku hayaan ururka al-Shabaab.
Mashruucan ayaa la filayaa in la sii ballaariyo oo la gaarsiiyo meela kale, waxaana la filayaa inuu qeyb ka noqdo qorshaha ballaaran ee uu Mareykanka kula baratamayay Shiinaha, guud ahaan Afrika gaar ahaan gobolkan aadka istaraatiijiga u ah ee geeska Afrika.
Ciidamada Mareykanka ayaa gala safar 60 mile ah oo dhinaca hawada ah iyaga oo isticmaala diyaaradaha qumaatiga u duula laga bilaabo garoonka caalamiga ah ee Muqdisho iyo saldhigoodan ay ku leeyihiin Soomaaliya ee Balidoogle
Madaxweyne Farmaajo oo maanta Garoowe kula kulmay hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada